DFS & Hay'adda lacagta adduunka oo gaaray heshiis ku saabsan dayn cafinta - Horseed Media
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Hey’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa gaaray heshiis ku saabsan geeddi socodka Deyn Cafinta iyo dib-u-eegista Wajiyada 2aad iyo 3aad Barnaamijka ECF ee dib-u-habeynta hannaanka Maaliyadda iyo Horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya.
Heshiiskaan ayaa ka dambeeyay kadib markii IMF ay soo gabagabeeysey wada hadallo toos ah oo ay la yeesheen dowladda Soomaaliya, waxaana sida warbixinta lagu xusay uu ku xiran yahay inay ansixiyaan guddiga Sare ee IMF.
“Waxa aan ku faraxsanahay in Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hey’adda IMF ay gaareen heshiis muhiim u ah geeddi socodka deyn-cafinta iyo Dib-u-eegista Wajiyada 2aad iyo 3aad Barnaamijka ECF ee dib-u-habeynta hannaanka Maaliyadda iyo Horumarinta dhaqaalaha dalka”. Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Go’aanka IMF ayaa ku soo beegmaya kaddib markii ay dhammaatay doorashadii Madaxweynaha Soomaaliya oo 15 bishaan May dalka ka dhacday.